अमेरिकामा सुतिरहेकै अवस्थामा अस्ताए नेपाली युवा – " सुलभ खबर "
अमेरिकामा सुतिरहेकै अवस्थामा अस्ताए नेपाली युवा
वासिंटन डिसी । अमेरिकामा एक नेपाली युवाले सुतिरहेकै अवस्थामा संसार त्यागेका छन् । बाल्टिमोरमा बस्दै आएका बाग्लुङका ३१ वर्षीयसुनिल केसीको सुतिरहेकै अवस्थामा ज्या,न गएको हो ।
उनका सहकर्मीका अनुसार सुनिल २ दिनदेखि काममा आएका थिएनन् । उनी आफूले काम गर्दै आएको स्टोरको माथिल्लो तल्लामा बस्थे । २ दिनसम्म काममा नआएपछि उनी बस्ने तल्लामा सहकर्मीहरुले गएर ढोका खोल्दा नखुलेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।
उनको मृत्युको आधिकारिक कारण खुलेको छैन । श,वलाई बाल्टिमोरको कोरोनरी हाउस राखिएको छ ।सुनिल करिव ४ वर्षअघि अमेरिका आएका थिए । उनले हालसालै मात्रै अमेरिकामा बस्न कानुनी हैसियत प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकामा बस्न कानुनी हैसियत प्राप्त गरेपछि केसी नेपालबाट श्रीमती र छोरी ल्याउने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको औषधि छैन। तसर्थ उपचारमा धेरै खर्च हुँदैन। ज्वरो आए पारासिटामोल खाने, खोकी र सास फेर्न सजिलो हुने औषधि खाने, मनतातो झोलिलो खाना खाइरहने, आराम गर्ने। गाह्रो भएमात्र अस्पताल जाने।कोरोना संक्रमण भएको १ व्यक्तिले औसत ३ देखि ६ जनालाई मात्र रोग सार्न सक्छ। तसर्थ कसैलाई संक्रमण भयो भन्दैमा सबै आत्तिनु पर्दैन।
डा. रवीन्द्र पाण्डे कोरोना बिरुद्ध मानसिक रुपमा तयार हुनको लागि, भोलि सहर लक डाउन भयो भने सुरक्षित हुनको लागि २ -३ महिनाको जोहो गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै : नियमित खाने औषधि, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ , प्राथमिक उपचारका औषधि जस्तै – सिटामोल, रुघाखोकीको औषधि।सहरमा संक्रमण तीब्र देखिन थालेमा गाउँ जानु उत्तम विकल्प हो। गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ।
विश्वासिलो मेडियाको मात्र समाचार पढ्ने, सुन्ने, विश्वास गर्ने बानी बसाल्दा अनावश्यक मानसिक दवाव झेल्नु पर्दैन। बजारमा मास्कको अभाव छ | कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि मास्कको भूमिका निकै कम छ। बराबर हात धुने, सफा रहने गर्यो भने कोरोना संक्रमण सर्दैन। तसर्थ मास्क नपाएपनि डर मान्नु पर्दैन। मास्क भन्दा पंजा महत्वपूर्ण छ।
बजारमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको अभाव भएमा स्प्रिट-कपास, साबुनपानी आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण फैलियो भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सेना, प्रहरी लगायतले अस्पताल, चौर ( टेन्ट ) आदिमा राखेर उपचार गर्छन। विश्व स्वास्थ्य संघ, बिदेशी स्वयमसेवी संस्था, बिदेशी राष्ट्र लगायत धेरैको हामीले सहयोग गर्नेछन्। कोरोना भाइरसको लागि गर्मी प्रतिकूल मौसम हो। हामीकहाँ गर्मी सुरु भएको छ। तसर्थ जाडोमा जस्तो छिटो फैलिने सम्भावना एकदम कम छ।
कोरोना भाइरस बिरुद्ध खोप, औषधि आदिको अनुसन्धान भइरहेको छ। क्यान्सरलाई त आत्मबलले जित्न सकिन्छ भने यो केवल रुघा हो। तसर्थ डराउनु पर्दैन। यसको रोकथाम हाम्रो हातमा छ। भीडभाडमा नजाने, हात धोइरहने, बिना काम घर बाहिर नजाने गर्दा ९० % रोकथाम हुन्छ।( डा. रवीन्द्र पाण्डेकाे फेसबुकबाट साभार)